Bahrain: Navotsotra ilay bilaogera rehefa nandoa onitra! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Jolay 2018 5:36 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Febroary taona 2007)
Bilaogera Bahrainita malaza Mahmood Al Yousif namariparitra ministra iray ho ‘adala’. Nitory ity bilaogera ity avy eo ilay minisitra, ka nampanantsoin'ny CID izy omaly.
Nankany amin'ny mpampanoa lalàna izy androany, ary nanontaniana indray nandritra ny adiny telo, teo anatrehan'ny mpisolovava, ary navotsotra rehefa nandoa onitra.
“Tsara ny manamarika fa amin'ny lalàna any Bahrain, tsy mahazo manapa-teny mpampanoa lalàna mandritra ny famotorana ireo mpisolovava manatrika, tsy azo atao ny manohitra ny fanontaniana na manoro hevitra ny mpanjifany tsy hamaly fanontaniana iray manokana! Mipetraka fotsiny izy ireo mandrapahatongan'ny faran'ny fivoriana amin'izay fotoana izay anomezana fahafahana azy ireo hametraka fitarainana ary manao fangatahana toy ny fangatahana kopian'ny raharaha any amin'ny mpampanoa lalàna ary ny famotsorana ny voampanga amin'ny fanekeny manokana na amin'ny fandoavana onitra, fa tsy mankany am-ponja mandritra ny faran'ny herinandro ohatra. , “hoy i Al Yousif nanoratra.
“Rehefa nifarana ny adiny telo nanaovana ny famotorana, nangataka aminay izy hamarana ny fotoana ho ao amin'ny efitrano fiandrasana mandritra ny fotoana hanapahan-kevitra momba azy. Nanao izany izy ary nanapa-kevitra fa misy fanitsakitsahan-dalàna ity raharaha ity ka napetraka onitra fanafahana mitentina BD500 (1325 dolara Amerikana). Nanizingizina fa handoa izany amin'ny anarako ny mpisolovavako ary nivoaka izahay. “
Ny zavatra manaraka dia nandalo tao amin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna ny raharaha mba hanapa-kevitra raha hanaiky ilay raharaha sy hitondra izany any amin'ny fitsarana, na handà izany ary hanakatona ny raharaha. Ho hita eo izany rehetra izany afaka andro vitsy. Raha tsy hoe, manaisotra ny raharaha fanalam-baraka hanenjehana ahy ny mpitory, ary na dia hajanona aza ny raharahany, dia mbola miankina amin'ny mpampanoa lalàna ihany izany ary amin'ny tombotsoan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny raha handroso miaraka amin'izany na handao izany ” hoy i Yousif manazava.
Hampangina azy ve izany? Ary inona ny toroheviny ho an'ireo bilaogera ao amin'ny fireneny?
“Inona no manaraka?” Inona no hataon'i Mahmood Al-Yousif? Hanova ny lalana izoran'ny bilaogy ve aho, hifantoka amin'ny lahatsoratra tsy ara-politika, hitsahatra hanakiana ny manampahefana sy ny zava-bitan'ny governemanta ve aho, hiafina ve aho, tokony handà ny handoa onitra ve aho ary halefa any am-ponja andro vitsivitsy mba ho maritioran'ny foto-kevitra? Inona no manaraka?, “hoy izy nanoratra.
“Ny manaraka dia bizina toy ny mahazatra ahy. Zavatra iray tiako andrisihina mafy ny bilaogera Bahrainita ny miafina. Tsy mendrika ny hahafantarana anao tahaka izay iainako ankehitriny. Tsy afaka mitory olona tsy fantatra anarana velively izy ireo ary fantatr'izy ireo izany. “
Tsy ilaina ny milaza fa niteraka fanohanana manerantany ho an'i Yousif ny adiny amin'ny manampahefana. Ataovy izay hamakiana ny sehatra fanehoan-kevitra ao amin'ny bilaoginy.
Bilaogera namana, Lulu nanararaotra hisaona ny fahalalaham-pitenenana.
“Ankehitriny, raha afaka miantso ny namako rehetra mba hangina iray minitra ho fanomezam-boninahitra ny fahafatesan'ny fahalalaham-pitenenana aho, hiaraka aminy anie ny fandriampahalemana,” hoy izy nanamarika.
Nanohana an'i Al Yousif miaraka amin'ny taratasy misokatra i Silly Bahraini Girl :
“Tsy azoko mihitsy hoe nahoana izy no mahatsiaro ho asiana manokana avyamin'ny eritreritra nosoratanao ao amin'ny diarinao manokana antserasera, izany hoe ny bilaoginao. Raha tsy tiany ilay izy, tsy fantatro hoe maninona izy no tsy nanova ny fantsona, ny tiako ambara dia hoe mijanona tsy miditra ao amin'ny sehatra antseraseranao manokana. Raha ny marina, dia tsy nanery azy ho avy hamaky ny bilaoginao ianao, sa tsy izany? Na iza na iza nadika teny taminy izay nosoratanao, dia tonga araka ny sitrapony manokana…sa tsy izany. Koa nahoana izy ireo no mitaraina ankehitriny? ” Manontany tena izy.